यी हुन् कोरना बिरुद्द ज्यानको बाजी राखेर अमेरिकाको ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएकी नेपाली नर्स ! «
यी हुन् कोरना बिरुद्द ज्यानको बाजी राखेर अमेरिकाको ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएकी नेपाली नर्स !
Published : 15 April, 2020 8:19 pm
अमेरिकाको सियाटलमा पहिलोपटक कोरोना भाइरस कोभिड १९ का बिरामी फेला परेका थिए। कोभिडबाट सबैभन्दा बढीको मृत्यु हुने देशमा अमेरिका नै पहिलो नम्बरमा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसारका हाल अमेरिकामा कोभिडबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या साढे २६ हजार नाघिसकेको छ। सं’क्रमितको संख्या ६ लाख नाघिसकेको छ।विश्वभर कोभिड १९ का बिरामीको उपचारमा ज्यानको बाजी थापेर स्वास्थ्यकर्मीहरु अहोरात्र खटिइरहेका छन्। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ वासिङ्टन हार्बरभ्यु मेडिकल सेन्टरमा कार्यरत ‘नर्स प्राक्टिसनर’ हुन् शिखा भारती। कोभिड-१९ का संक्रमितको उपचारमा ‘फ्रन्टलाइन’मा खटिएकी शिखाको घर झापाको बिर्तामोड हो ।
कहिले सं’क्रमितको घेरामा पर्न सक्ने हो टुंगो हुँदैन। तर मैले यसलाई अवसरको रुपमा पनि लिएकी छु। सुरुको केही साता त चिन्ताको बीच पनि काम गर्दा हामी निकै उत्सुक पनि थियौं। अहिले हामीले आफ्नो ड्युटी राम्ररी निभाएका छौं। सौभाग्यवश हामी त्यस्तो जोखिममा परेका छैनौं। हरेक दिन ड्युटीमा जाँदा आज के होला, कति नयाँ केस आउलान् भनेर सोच्छु। आफू र आफ्नो टिमको सदस्यलाई कसरी सुरक्षित राख्ने होला भन्ने लागिरहन्छ। आफूलाई कसरी जोखिमरहित बनाउनेमा ध्यान पुर्‍याइरहेकी हुन्छु।ताजासमाचरमा छापिएको छ |